Koloiko sy Hajaiko ny Teniko | Fifaninanana tononkalo fitiavana 2017
Fifaninanana tononkalo fitiavana 2017
Andinindininy momba ilay fifaninanana tononkalo ho fankalazana ny andron'ny mpifankatia 2017.
Indro ary ny vokatra ôfisialy tamin'ilay fifaninanana tononkalo fitiavana 2017 izay nokarakarain'ny Koloiko sy Hajaiko ny Teniko ho fankalazana ny andron'ny mpifankatia. Ireo ambany ireo ny lohatenin'ny tononkalo, arahin'ny anaran'ny mpanoratra, ary ny isa azon'ilay tononkalo.
1 - Fo Tia nosoratan'i Barry Sirjon (isa 63.88)
2 - Mifankatia Hatrany nosoratan'i Zara Ainga (61.33)
3 - Soa Fa Nisy Anao nosoratan'i Toky Ny Aina Joseclaudio (54.67)
4 - Ry Tiako nosoratan'i Notahina Francia (47.20)
5 - Rehefa Tia nosoratan'i Cotton Wood (45.38)
6 - Satriko nosoratan'i Lalah Rasetamalala (45.00)
Momba ny Naoty
Ireo misoratra eo ambony ireo ny naoty azon'ny mpifaninana. Ireo isa ireo dia fitambaran'ny isa nomen'ny mpitsara sy ny salan'isan'ireo isa nomen'ny mpamaky. Ny antsipirihan'ny naoty miaraka amin'ny fanamarihana avy amin'ny mpitsara dia efa nalefa any amin'ireo mpifanianana tsirairay.
Tamin'ity fifaninanana ity dia ireo teny diso fanoratra ihany no nosokajiana ho diso tsipelina. Nandeferana ny diso teo amin'ny fampiasana ny mari-piatona.
Ireo telo voalohany no nahazo loka tamin'ity fifaninanana ity. Ny fikambanana Arirarira no nanome ny loka, ary nisy koa mari-pahatsiarovana avy amin'ny Western Union. Ny loka dia nozaraina tamin'ireo mpifaninana teny amin'ny Insitution FJKM Rainandriamampandry tamin'ny 04 Martsa 2017. Nandritra io lanonana io koa no nanamarihana ny tsingerintaona fahafito niforonan'ny vondrona Koloiko sy Hajaiko ny Teniko. Nisy ny fanapahana koba sy fihinanana tsakitsaky niarahan'ny rehetra nifaly tamin'ny fiafaran'ny fotoana.
Fisaorana eram-po eran-tsaina no atolotra ireto olona sy fikambanana manaraka ireto noho ny fanampiana sy fanohanana nataony ka antony nahatontosana an-tsakany sy an-davany ny fifaninanana tononkalo fitiavana 2017:
- ny fikambanana Arirarira noho ny nanohanany ny hetsika sy ny fanomezany loka ho an'ireo mpifaninana,
- ny Western Union noho ny fanomezany mari-pahatsiarovana ho an'ireo mpifaninana,
- ny gazety Taratra noho ny namoahany mandrakariva ny vaovao momba ny fifaninanana,
- ireo mpitsara rehetra,
- ny Institution FJKM Rainandriamampandry noho ny nanomezany maimaimpoana ny efitrano nanaovana ny hetsika,
- ireo mpitendry valiha avy ao amin'ny Ako Miantefa noho ny fandraisany anjara tamin'ny fanafanana ny lanonana teny amin'ny IFR hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany,
- ny gazety Taratra noho ny namoahany mandrakariva ny vaovao momba ny fifaninanana sy ny hetsika teny amin'ny IFR,
- ny Faribolana Sandratra noho ny fandraisany anjara tamin'ny fiantsana tononkalo nandritra ny lanonana teny amin'ny IFR sy ilay famelabelaran-kevitra nahaliana nataon'ny filohany Riambola Mitia,
- ireo olona nikarakara ny koba sy ny tsakitsaky,
- ireo olona rehetra tonga nanatrika ny lanonana teny amin'ny IFR.
Izay indray izany no vita tamin'ity fifaninanana ity. Amin'ny manaraka indray manao tsaratsara kokoa. Arahabaina manokana izy telo dahy nahazo ny laharana telo voalohany dia i Barry Sirjon, Zara Ainga, ary Toky Ny Aina Joseclaudio.
Lanonana fanomezana loka tamin'ny fifaninanana tononkalo fitiavana 2017 sady fankalazana ny fahafito taonan'ny KHT.
Naka ny sary: Mainty Kely, Hary Razafy, Lalah Rasetamalala.